Blog Shop - Myanmar Blogshop - Apple cider vinegar
နေ့စဉ်ဟင်းချက်တဲ့ အခါ ဟင်းရွက်တွေသုတ်တဲ့အခါမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ပန်းသီးဗနီဂါကို အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
1. မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံဖုလေးတွေအတွက်တော့ အကုန်အကျမများဘဲ သဘာ၀အတိုင်း ကုသချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပန်းသီးဗနီဂါကို သန့် ရှင်းတဲ့ ပေါင်းတင်ဝါဂွမ်းစမှာ ဆွတ်ပြီး ၀က်ခြံဖုကို (နေ့စဉ်) အသာယာပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် (Toner) မလိုဘဲ မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှုာ ချောမွတ်တဲ့ အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်လာပါ။
2. ခြေဆီသိပ်ထွက်ပြီး ခြေနံပြင်းလွန်းလို့ လူကြားသူကြားရောက်ရင် ယုံကြည်ချက်(Confident)နည်းရလို့ စိတ်ညစ်ရတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ပန်းသီးဗနီဂါက အဖြေတစ်ခုပါ။ ခြေထောက်ဆေးဇလုံထဲ ပုံမှန်ခြေဆေးသလို ရေနွေးနဲ့ ပန်းသီးဗနီဂါကို ဆတူရောပြီး ထောက်မြှုပ်ရုံထည့်ပါ။ ၁၀မိနစ်မှ ၁၅မိနစ်ထိ နေ့စဉ်စိမ်ပေးပါက မှိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာနဲ့ အနံ့ဆိုးတွေပျောက်ကင်းလာမှာပါ။ ပြီးတော့ ခြေထောက်ခြောက်ပြီး ခြေထောက်ကွဲတတ်တဲ့ သူတွေလည်း အခုပြောတဲ့အတိုင်း ခြေထောက်စ်ိမ်ပြီး ဂျီးတွန်းကျောက်နှင့် ပွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3. နှာစေး၊နှာပိတ်အမြဲဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်း ပန်းသီးဗနီဂါက အိမ်တွင်းဆေးကောင်းတစ်လက်ပါ။ ပန်းသီးဗနီဂါလက်ဘက်ရည်တစ်ဇွန်းစာကို ပျားရည်၂ဇွန်း ငရုတ်သီးမှုန့် ၁ဇွန်း ရောမွေပြီး ရေရောပြီးသောက်ပေးပါက အမြဲနှာစေး၊ နှာပိတ်တတ်သူ၊ ထိပ်ခတ်နာ (Sinusitis) စတဲ့ နှာရောဂါတွေအပြင် လည်ချောင်းနာလည်းပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ သံပုရာသီးတခြမ်းရောပြီးတော့လည်းသောက်လို့ရပါတယ်။
4. ကြွက်နို့လို့ခေါ်တဲ့ Wart တွေအတွက်တော့ ဂွမ်းလုံးလေးမှာ ပန်းသီးဗနီဂါကို ရွှဲအောက်ဆွပ်ပြီး ကြွက်နို့ပေါ် ပလာစတာနဲ့ ကပ်ထားပါ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာလဲဆိုတော့ သက်သာပျောက်သွားတဲ့ အထိပေါ့။ သိပ်မကြာပါဘူး တချို့တွေဆို ၁ရက်၂ရက်နဲ့တင်သိသာလာပြီး ၁ပတ်၂ပတ်ဆို ကြွက်နို့တွေ ကြွေဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။
5. ဘောက်ကြောင့်ခေါင်းယားတဲ့သူတွေအတွက် ပန်းသီးဗနီဂါက အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းဆေးပါ။ ပန်းသီးဗနီဂါကို ရေနဲ့ရော ခေါင်းအနှံ့ဖြန်းပေးပြီး ၁၀/၁၅မိနစ်လောက်ထားထားပေးပါ။ ပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက်ပါ။ တပတ်ကို ၂ ကြိမ်လောက်ဆို ရပါတယ်။ ပန်းသီးဗနီဂါကို ရေနဲ့ရောရမယ့် အချိုးကတော့ 100ml Spray ဗူးလေး တစ်ဗူးကို ပန်းသီးဗနီဂါ ၁ဆ ရေ၄ဆနဲ့စပ်နိုင်ပါတယ်။
6. နှင်းခူကြောင့် လူကြားသူကြားကုတ်နေရလို့ ရှိူးပဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပန်းသီးဗနီဂါကို သန့်တဲ့ပေါင်းတင်ဂွမ်းစလေးမှာစွတ်ပြီး ယားယံတဲ့နေရာကို အသာယာပွတ်ပေးရင် ယားယံတာချက်ချင်းသက်သာပါတယ်။
7. မိတ်ကပ်အရမ်းလိမ်းလွန်းလို့ မိတ်ကပ်ဘရက်တွေ ညစ်ပတ်မြန်ပြီး ခဏခဏ၀ယ်နေရတဲ့ မမတွေအတွက်ပါ။ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ ခဲပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ ဘရက်ကို ပန်းသီးဗနီဂါမှာ စိမ်ထားပြီး ရေဆေးလို့ရပါတယ်။
ကဲ ဒါတွေကတော့ ပန်းသီးဗနီဂါရဲ့ မြောက်များလှစွာသော အသုံးပြုပုံတွေထဲက Beauty Hack လေးတွေပါ။ တခြားကျန်းမာရေးနဲ့ Diet တွေမှာလည်း ဘယ်လိုသုံးလည်းရေးပေးပါဦးမယ်။
ကျွန်မအိမ်မှာ သုံးတဲ့ Bragg တံဆိပ်ကတော့ ကမ္ဘာကျော်ပြီး American မှ Organic စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ တံဆိပ်ပါ။
ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် နာမည်၊ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လိပ်စာပေးပို့ပြီး မှာလို့ ရပါတယ်နော်
Brand Name Bragg Orangic Apple Cider Vinegar(with the mother)
Payment Method KBZ Pay
Delivery Method အိမ်တိုင်ရာရောက်ငွေချေစနစ်ရှိသည်
Daw Thin Su Htwe
Total Products: (1)
မင်္ဂလာစျေး မီးပွိုင့်အနီး ဗညားဒလလမ်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့
Price: MMK 12,000
Total View: 126